इमेज साप्ताहिक : 2020-02-09
काठमाडौंको बिकास र निकासका लागि नुवाकोटको विकल्प छैन : प्रचण्ड
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग
प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङ, बीचमा बागमती प्रदेशका
उप सभामुख राधिका तामाङ पञ्चकन्या गाउँपालिकामा आयोजित
भलिवल प्रतियोगिताको खेलमैदानमा । तस्बिर : इमेज
कविलास\_नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नुवाकोट जिल्ला उपत्यका काठमाडौंको विकास र निकासका लागि निर्विकल्प रहेको बताएका छन् । शनिवार पञ्चकन्या गाउँपालिकामा आयोजित भलिवल प्रतियोगितको उद्घाटनमा बोल्दै प्रचण्डले टोखा छहरे सुरुङ्ग मार्ग निर्माण भएपछि नुवाकोट जिल्लाको विकास र भविष्यको बारेमा कल्पनै गर्न नसकिने परिर्वतन हुने बताएका छन् ।
‘प्रस्तावित टोखा छहरे सुरुङ्ग मार्ग साधक बन्नेछ, नेपालकै पहिलो सुरुङ्ग मार्गका रुपमा निर्माण हुने त्यसले काठमाडौं उपत्यलाईलाई नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने छ, प्रचण्डले भने । उनका अनुसार रेलमार्ग, मध्यपहाडी लाकेमार्ग, सुरुङ्ग मार्ग र इन्धन भण्डकारका कारण नुवाकोट जिल्लाको विकास र सम्वृद्धिमा कल्पनै गर्न नसकिने परिवर्तन आउने छ । ल्हासा–लुम्बिननी रेलमार्ग, केरुङ्ग ठोरी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र विदुर नगरपालिका भित्रै निर्माण हुने राष्ट्रिय स्तरको तेल भण्डार केन्द्रले नुवाकोटको अवस्थालाई ब्यापक परिर्वतन गर्नेछ ।
‘मेरो सपनाको रुपमा रहेको ल्हासा– लुम्बिनी रेल मार्ग नुवाकोट हुँदै जान्छ, राष्ट्रिय स्तरको तेल भण्डारको केन्द्र बट्टार वा विदुर नगरपालिका भित्र निर्माण हुन्छ, प्रचण्डले भने– यसबाट नुवाकोट अन्तराष्ट्रिय स्तरको बजारको रुपमा विकास हुन्छ ।’ त्यस्तै राष्ट्रिय मेरुदण्डको रुपमा विकास हुन लागेको मध्यपहाडी लोकमार्गले नुवाकोटको अधिकांश भु–भागलाई छोएकोले त्यसबाट पनि जिल्लाले ठूलो फाइदा लिन सक्ने उने बताए ।
नुवाकोट जिल्लासंग भावनात्मक र अत्यन्त निकट सम्वन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वर्गिय पोष्टबहादुर बोगटीको स्मरण गरे ।
बोगटीको जीवनकालमा र उनले मन्त्री पद सम्हाल्दा भएको राष्ट्रिय सुधारलाई प्रचण्डले स्मरण गरे । ‘बोगटीका कारण नुवाकोट जिल्लासंग मेरो अर्कै खालको सम्वन्ध छ, नुवाकोट मेरो दिमागमा सधै ताजा भइरहने ठाउँ हो, व्यक्तिगत रुपमा साथीभाईहरूसंग कुरा गर्दा भन्ने गरेको यो कुरा आज म नुवाकोटको तपाई जनसमुदायकै माझमा पहिलो पटक भन्दैछु’ प्रचण्डले भने । त्यसैले पनि नुवाकोटको आफ्नो ध्यानमा रहिरहने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट पनि नुवाकोटको महत्व बढि रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सभापति एवं पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले छहरे टोखा सडक मार्गको विकास र स्तरउन्नतीका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । त्यस विषयमा उनले भौतिक पुर्वाधार मन्त्री र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू राखेर छलफल गराउने र सरकारको ध्यान तत्कालै केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, February 09, 2020 No comments:
लोकल रक्सिलाई मान्यता दिऔं
बट्टार\_बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवं नेकपा नुवाकोटका अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाले घरेलु मदिरालाई नीतिगत रुपमै बैधानिकता दिनु पर्ने बताए । आफ्नै बारीमा उत्पादन हुने मकै, कोदोको प्रयोग गरेर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा नीतिगत रुपमै ब्यबस्था गर्न प्रदेश सभामा आबाज उठाउने उनले बताए ।
मात्रा अनुसार प्रयोग गर्दा बिभिन्न रोगको औषधि समेत हुने दावी गर्दै राज्यले यसलाई नीतिगत रुपमा ब्यबस्था गरेर स्थानिय तहले उत्पादनमा सहयोग गरे बताएका छन् । नुवाकोट महोत्सवको नवौं दिनको प्रमुख अतिथि रहेका खतिवडाले कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै स्थानिय उत्पादनको उपयोगमा कडाई हुँदा अबौँ रुपैयाँ बिदेशी मदिरामा खर्च भएको चन्दै चित्त दुखाए । ‘हामी लुकिलुकी मदिरा सेवन चाँही गर्छौ अनि आफ्नौ शुद्ध अर्गानिक र रसायन नभएको मदिरलाई चाँहि किन अबैध बनाइरहेका छौं, खतिवडाले भने– अब यो हुनसक्दैछ, म प्रदेश सभामा यसको बारेमा आबाज बुलन्द गर्छु ।’
कत्तिपय नागरिकहरूको रोजिरोटी मदिरा उत्पादनबाट धानिदै आएको अहिलेको अवस्थालाई प्रशासन र सरकारले बिर्सन नहुने उनको तर्क छ । पिउनका लागि बैज्ञानिक रुपमा ठिक छ वा छैन भन्ने परिक्षणको व्यवस्था गरेर भएपनि नुवाकोटमा घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्रिलाई बैधता दिने उनको दावी छ । ‘यसबाट आर्थिक पक्षमा व्यापक सुधार आउने छ’ खतिवडाले भने ।
प्रेस युनियन नुवाकोटमा सुवेदी
विदुर\_नेपाली काँग्रेसमा आस्था राख्ने पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोटको अधिवेशन शनिवार विदुरमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले सर्बसम्मत रुपमा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति बनाएको हो । उपाध्यक्ष सुरज सिलवाल, महिला उपाध्यक्ष गमला लामा, सचिव रबिन दाहाल, सह सचिव श्रीकृष्ण आचार्य, महिला सह सचिव उषा रेग्मी, कोषाध्यक्ष भगवती लामा चुनिएका छन् । त्यस्तै, कार्य समितिको सदस्यहरूमा राकेश डंगोल, बिशाल देवकोटा, रुप्सना अर्याल, प्रल्हाद केसी र अर्जुन ढुङ्गेल चुनिएका छन् ।
युनियनको केन्द्रिय प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधिको नाम भने सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रमा २६ र प्रदेशमा २० प्रतिनिधि अधिवेशनका लागि नुवाकोटबाट सहभागि हुनेछन् । आन्तरिक विवदाका कराण प्रतिनिधिको नाममा टुङ्गो नलागेपछि नाम सार्वजनिक नभएको बताइएको छ ।
युनियनको सातौं जिल्ला अविधेशनको उद्घाटन नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले गरेका थिए ।
प्रचण्ड आज पनि नुवाकोट आउदै
विदुर\_पञ्चकन्या गाउँपालिकाद्धारा आयोजित भलिवल प्रतियेगिताको उद्घाटनका लागि शनिवार नुवाकोट आएका नेकपाका अध्यक्ष पेष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज सोमवार पनि नुवाकोट आउने भएका छन् ।
आज नुवाकोटमा आयोजित बेग्लाबेग्लै दुई वटा कार्यक्रममा सरिक हुन उनी नुवाकोट आउन लागेका हुन् । नुवाकोटको नमूना विद्यालयमा छनौट भएको किस्पाङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ३ काहुलेमा रहेको ऐंसेलुभुमे माविको भवन उद्घाटन र विदुर नगरपालिका वडा नं. ७ तुप्चेमा रहेको चण्डेश्वरी माविको अभिभावक भेला उद्घाटन र तत्कालिन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष स्वर्गिय पोष्टबहादुर बोगटीको शालिक अनावरण कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड जिल्ला आउने तय भएको छ ।
नेकपा नुवाकोटका अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाका अनुसार आज सोमवार विहान ९ बजे ऐंसेलुभुमे मावि र साढे ११ बजे चेण्डेश्वरी माविको कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागि हुनेछन् । उनको साथमा उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुन पनि आउने तय भएको छ ।
आज समापन हुने
बट्टार\_छौठौं नुवाकोट महोत्सव एक दिन थपिएको छ । माघ १६ गतेबाट जारी रहेको महोत्सवको अन्तिम दिन आइतवार तोकिएको भएपछि आइतवार नै आयोजकले आज सोमवार समापन गर्ने गरि एक दिन थप गरेको हो । ११ दिनका लागि आयोजना गरिएको महोत्सव अब १२ औं दिनको भएको छ ।
महोत्सव समापन नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं नुवाकोटका नेता अर्जुननरसिंह केसीले गर्ने नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्शकहरूको माग अनुसार महोत्सव लम्बाईएको हो । ल्होसार, विवाह तथा ब्रतवन्धको साइत यही महोत्सव अवधिमा धेरै परेको र जिल्लाका धेरै दर्शकहरूले अझै महोत्सव अबलोकन गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि एक दिन थप गरिएको संघका प्रवक्ता सविनराज भण्डारीले बताए ।
नुवाकोट जिल्ला अब्बल : राधिका
बट्टार\_बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले सबै क्षेत्रबाट नुवाकोट जिल्ला अब्बल रहेको बताएका छन् । छैठौँ नुवाकोट महोत्सबको आठौँ दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिकासको क्रम एकै पटक नदेखिने बताउदै बिकासको क्रम समय अनुसार परिबर्तन हुँदै जनो बताए ।
यस नुवाकोट जिल्ला काठमाडांैबाट नजिक रहेपनि बिकासको काममा केहि ढिलाई भएको उनले बताए । जल जमिन र जलबिद्युतको हिसाबले अब्बल रहेको नुवाकोटमा लगानीको प्रशस्त सम्भाबना रहेको बताए । महोत्सबले त्यस्ता सम्भाबनाहरूको उजागर गर्दै लगानी सिर्जना गर्न सक्ने उप सभामुख तामाङको तर्क छ ।
उनले महोत्सवले कषि र पर्यटनलाई जोड दिनु पर्नेमा त्यो हुन नसेको टिप्पणी गरे । महोत्सवले समग्र जिल्लाको पहिचान र सम्भावनालहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ‘कस्तो कस्तो’ लागेको उल्ल्ेख गरे ।
धार्मिक एतिहासिक कला सस्कृतिको सम्बद्र्धन, दिगो आर्थिक बिकासको लागी ब्यबसायिक प्रबद्र्धन भन्ने नारासहित सञ्चालन भएको महोत्सवले समग्र जिल्लाको बिकासको अबसर रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् । जिल्लाको उत्पादन, कृषि क्षेत्र, पर्यटकिय क्षेत्र लगायतको बिषयहरू एकै स्थानबाट प्रचार प्रसार गर्ने थलो महोत्सब रहेको बागमती प्रदेशका उपसभामुख तामाङको भनाई छ ।
सस्तो शुलभ बजार र मनोरञ्जन एकै स्थानमा भएका कारण नागरिकहरूको दिन प्रतिदिन आकर्षण बढ्दो रहेको छ । आज सोमवारसम्म (१२ दिन) चल्ने महोत्सवमा नुवाकोट सहित अन्य जिल्लाहरूबाट समेत दर्शकहरू आइरहेका छन् । महोत्सबले जिल्लाको कृषि, पर्यटन, संस्कृति तथा धार्मिकस्थलको प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव सार्थक हुने विश्वास लिएको छ ।
महोत्सवमा राखिएका २५० स्टलमा कृषि, पशु, हस्तकला तथा घरेलु उत्पादनका सामग्री, बदम, चामल, ट्राउटमाछा र स्ट्रबेरी, किस्पाङको भुइँस्याउको प्रर्दशनी एवम् बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ । महोत्सबको स्टलहरूमा स्थानिय सिप, कला र उत्पादनहरूमा नागरिकहरूको आकर्षण बढेको छ ।
छौठौं नुवाकोट महोत्सवमा विदुर नगरपालिकाले राखेको स्टलमा माटोको भाडा बनाएर सहभागिलाई देखाइदै ।
बट्टार\_नुवाकोटमा जारी छैठौं महोत्सबमा नागरिकहरु सिस्नुको स्टलमा भिड लागेको छ । नुवाकोट र रसुवाको बिभिन्न स्थानबाट संकलन गरि सिस्नु महोत्सबमा बिक्रिको लागी राखिएको छ । स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ महोत्सबमा बिक्रि तथा प्रदर्शनी गरिएको छ ।
सिस्नु ग्रामीण महिलाको फुर्सदको व्यवसाय र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत समेत भएको छरु। सिस्नु विदेशका आफन्तलाई पठाउने कोसेलीको रुपमा प्रख्यात हुँदै आएको छ । मास, सिमीलगायत दालमा समेत मिलाएर प्रयोग गर्न सकिने सिस्नुको सुपले शरीरमा गर्मी बनाउने भएकाले जाडो मौसममा खानु उपयुक्त हुन्छ । सिस्नुको सुप स्वादिलो हुनुका साथै प्रोटिनको राम्रो स्रोत मानिन्छ । सिस्नु पूर्ण अर्गानिक खाद्य बस्तु हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नमुना विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सिस्नुमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी फलाम तत्व, कुड प्रोटिन, फाइबर, फ्याट, जलांश पाईन्छ ।
महोत्सवको मञ्चमा बालन भजन
बट्टार\_धार्मिक एतिहासिक कला संस्कृतिको सम्र्वद्धन, दिगो आर्थिक बिकासको लागी ब्यबसायिक प्रवद्र्धन भन्ने नारा लिएको छौठांै नुवाकोट महोत्सवले यो पाली केही नयाँ स्वाद दिएको छ । जिल्लाको उत्पादन, कृषि क्षेत्र, पर्यटकिय क्षेत्र लगायतको बिषयहरू एकै स्थानबाट प्रचार प्रसार गर्ने थलोको रुपमा रहेको महोत्सबले स्थानीय जीवन्त कला संस्कृतिलाई पनि बरोवरी स्थान दिएको छ ।
छौठौं नुवाकोट महोत्सवमा नवौं दिन बालन भजन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. २ को तारकेश्वर भजनकिर्तन समुह पहिलो, बाघभैरम भजन समुह दोश्रो र बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ११ तिगाउँको पञ्चकन्या बालन भजन समुह तेश्रो भएको छ । २० मिनेटको अवधिमा प्रतियोगि समुहहरूले दिएको प्रस्तुतिका आधारमा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो छुट्याइएको छ ।
पहिलो हुने समुहलाई नगद १२ हजार, दोश्रो समुहलाई ९ हजार र तेश्रो हुने समुहलाई ६ हजार रुपैयाँ र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य एवं बालन भजन प्रतियोगिताका संयोजक ध्रुबकुमार राबलले जानकारी दिए । ‘लोपउन्मुख कुरालाई महोत्सबले संरक्षण गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो’ संयोजक रावलले भने ।
नुवाकोट जिल्लामा लोपउन्मुख रहेको वालन भजनको संरक्षण र युवा पुस्तालाई यस प्रति आकर्षण प्रदान गर्नका लागि महोत्सवमा प्रतियेगिता राखिएको रावलले बताएका छन् । छौठौं नुवाकोट महोत्सव आयोजक संस्था नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले नुवाकोट जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूलाई महोत्सव स्थलमा प्रर्दशन गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
महोत्सवमा आयोजित बालन भजन प्रतियोगितामा सहभागिहरूले पनि यो सुरुवातको प्रशंसा गरेका छन् । ब्रतवन्ध, पुजाआजामा मात्रै नभई जिल्लाले नै आयोजना गर्ने यस्ता विशेष औपचारिक कार्यक्रममा पनि बालन भजनले प्राथमिकता पाउनु पर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
सधै ‘आइटम डान्स’ मात्रै झल्कने मञ्चमा बालन भजनका साथमा परम्परागत पोशाकमा पुरुषहरू नाच्न थालेपछि दर्शकहरू पनि उत्साही भएका थिए । ‘महोत्सवले सिङ्गै जिल्लालाइर्ए यसरी परिचय गराउनु पर्छ, नयाँ कुरा मात्रै होएन पुराना कुराहरुले पनि यत्तिकै प्राथमिकता पाउनु पर्छ, महोत्सव अबलोकव गर्न आएका सुर्यगढीका सुर्दशन नेपालले भने ।
बालन भजनको इतिहास
रामायण, महाभारत जस्ता पौराणिक ग्रन्थलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बताउने बालन नाचको सुरुवात भएको हो । संस्कृत भाषाको रामायणलाई १६५ वर्षअघि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपालीमा उल्था गरेपछि घर–घरसम्म पुग्यो । तर नुवाकोट, धादिङ्ग रसुवा लगायतका जिल्ला सहित नेपालको अधिकांश भुभागमा त्योभन्दा अघिदेखि नै रामायणलाई गीतिनाटकका रूपमा प्रस्तुत गरिंदै आएको थियो । त्यही नै बालन नाच हो । यो नाच ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायमा प्रचलित छ । बालनलाई पहिला पहिला ‘बाहुननाच’ पनि भनिन्थ्यो । बालन विशेषगरि गीता, महाभारत, रामचरित्र, कृष्णचरित्र र भगवानका दश अवतारलाई लिएर तयार पारिन्छ । बालन नाच थरी-थरीका भए पनि अहिले रामायणमा आधारित मात्रै नुवाकोटको धेरै ठाउँमा प्रचलित छ ।
हिन्दूधर्मावलम्बीहरू पूजा आराधना तथा राती जाग्रामको समयमा बालनका टोली ल्याएर गाउने र नाच्ने चलन छ । बालन भजन माघ महिनामा बढि हुन्छ । यस नाचको नियम अनुसार गाउने र नाच्ने गरेर २५ जनाको टोली चाहिन्छ । तर अहिले यस विषयमा विज्ञता भएका र जानकारी भएकाहरू कम भएकोले गाउँने र नाच्नेको संख्या कम हुँदै आएको छ । यसरी नाच्नेलाई ‘गर्रा’ भनिन्छ । गुरुको निर्देशन अनुसार गर्राले भूमिका निर्वाह गर्छन् । बालन भजन लोकसाहित्य हो ।
सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछारको तयारी भब्य
तामाङ घेदुङद्धारा दुप्चेश्वर गाउँपालिका आयोजित
सोनाम ल्होछार कार्यक्रम ।
विदुर\_तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछारको गाउँगाउँमा ल्होछारको रौनक जारी नै छ ।
सोनाम ल्होछार मुल समारोह समितिले माघ २९ गते बुधबार त्रिशुली कोलोनीमा आयोजन ागर्न लागेको बृहत्त सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ ।
मञ्जुश्री संवत २८५६ औँ मुसा वर्ग सोनाम ल्होछार कोलनी स्थित थ्रिडि खेलमैदानमा आयोजना गर्न लागिएको हो । उक्त कार्यक्रममा तामाङ समुदायबाट पदिय जिम्मेवारी वहन गर्न माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिने तामाङ घेदुङ नुवाकोटका अध्यक्ष जयमान वाइवाले जानकारी दिए । तउनले त्यस अवसरमा पुराना पुस्ताको कलालाई सम्मान गर्दै जिल्लाको विभिन्न भेगमा भुभागमा प्रचलित तामाङ सेलो, मेन्दोमायाको साथमा झाँकी प्रस्तुत गरिने बताए । उनले सम्पुर्णलाई तामाङ भेषभुषामा सजिएर आउन आह्वान गरेका छन् ।
यस्तै म्यागङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार कार्यक्रमका प्रबक्ता रुपबहादुर तामाङले व्यक्ति जुनसुकै राजनैतिक आस्था र सिद्धान्तमा भएता पनि आफ्नो संस्कृति जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने बताए । विशेषगरी तामाङ घेदुङ जिल्ला र केन्द्रमा केन्द्रित भएकोले जिल्लाको प्रत्येक वडामा समिति बनाएर काम गर्न सकेमा ल्होछारलाई पहिचानको रुपमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङ नुवाकोट सहित विभिन्न १७ वटा सस्थाले संयुक्त रुपमा गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रममा तामाङ खानालाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत दर्ता भएको नेपालको ‘राष्ट्रिय लिपी रञ्जना लिपी’को प्रबद्र्धनको लागि विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय क्लब तथा संघ÷संस्थाको संयुक्त आयोजनामा शनिवार नुवाकोटको विदुर लोकतान्त्रिक चोकमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको रञ्जना लिपी कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष सुलेख क्यालीग्राफी जात्रा । – सुजित भण्डारी
अनुसहितका खेलाडी सम्मान
सागमा स्वर्ण पदक विजेता अनु अधिकारीलाई
पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्मान गर्दै ने
कपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्बिरः इमेज
कविलास\_नुवाकोटको पञ्चकन्या गाँउपालिकाले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक विजेता आफ्नो गाँउपालिकाका अनु अधिकारी सहितका खेलाडीहरुलाई शनिवार नगद सहित सम्मान गरेको छ ।
गाउँपालिकाको आयोजनामा भइरहेको ‘चेयरम्यान कप’ भलिवल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा खेलाडीहरुलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट गाउँपाकिलाले सम्मान गरेको हो ।
पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अनु अधिकारीले हालै सम्पन्न सागमा कराँतेको कुमुेतमा स्वर्ण पदक जितेका थिए । उनलाई सम्मानपत्र सहित ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै रजत पदक विजेता अनिता अधिकारी भण्डारीलाई ३० हजार रुपैयाँ र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै नुवाकोट जिल्लामा जन्मेर १३ औं सागमा स्वर्ण पदक विजेता बन्न सफल फुटबलका अभिषेक रिजाल, लक्ष्मी मगर र बृद्धिबहादुर तामाङलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको हो । त्यस्तै सागका रजत र कास्य पदक विजेता मिना ग्लान, कृष्णबहादुर तामाङ, संजित डंगोल, अस्मिता राई, अञ्जु तामाङ, रेजिन रिमाल र राजिव पुडासैनीलाई समान १० हजार रुपैयाँ र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ ।
यसै बीच, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिवारबाट कविलास पुरनीडाँडा स्थित कालिका माविको खेलमैदानमा प्रथम चेयरम्यान कप भलिवल प्रतियेगिता सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतियोगितामा नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहबाट टिम सहभागि भएका छन् । मंगलवार फाइन खेल हुने पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले बताएका छन् ।
प्रतियोगितामा पहिलो हुने समुहलाई एक लाख रुपैयाँ, शिल्ड र प्रमाण पत्र, दोश्रो हुनेलाई ७५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्र, तेश्रो हुने समुहलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ ।
पञ्चकन्या गापाले खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरुको प्रोत्साहनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरेर कार्यक्रम र गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।अन्तराष्ट्रिय,राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी हुने तथा सहभागिह हुने आफ्नो गापाका खेलाडीहरुलाई लागि आर्थिक, होटल तथा हवाई भाडा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
विदुर\_प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङले नुवाकोट प्रचारप्रसारको अभाबले ओझेलमा परेको बताए ।
पर्यटन प्रबद्र्धनको माध्यमबाट नुवाकोटमा रहेका १२ वटै स्थानिय तहले मनग्य आम्दानी गर्ने श्रोत हुँदा हुँदै पनि प्रचार प्रसारको कमिले गर्दा ओझेलमा बस्नु परेको बताए । मेला महोत्सबहरू एक स्थानमा भन्दा पनि बिकेन्द्रिकृत भएमा समग्र जिल्लाको चिनारीको प्रस्फुटन हुने बताए । छैटौँ नुवाकोट महोत्सबको सातौँ दिनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिकासको लागी आबाश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय तहले बिनियोजन गरेतापनि निर्माण कार्यमा भएको ढिलाईले समस्या भएको बताए ।
धार्मिक एतिहासिक कला सस्कृतिको सम्बद्र्धन, दिगो आर्थिक बिकासको लागी ब्यबसायिक प्रबद्र्धन भन्ने नारासहित सञ्चालन भएको महोत्सवले समग्र जिल्लाको बिकासको अबसर रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् । जिल्लाको उत्पादन, कृषि क्षेत्र, पर्यटकिय क्षेत्र लगायतको बिषयहरू एकै स्थानबाट प्रचार प्रसार गर्ने थलो नुवाकोट महोत्सब रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङको भनाई छ ।
एमसीएको मुआब्जा बितरण प्रक्रिया अघि बढ्दै
विदुर\_मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) बारे सदनदेखि सडकसम्म बहस चलिरहेका बेला आयोजनाले काम नै अघि बढाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालको निर्माणाधीन ४०० केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा ४०० केभी को सवस्टेशन निर्माणका लागि आयोजनाले अधिग्रहणको तयारी गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागेको छ ।
आयोजना क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गाको पुरै कित्ता तथा यसमा रहेका संरचनाहरू स्थायी रूपले प्राप्त गर्नुपर्र्नेे भएकाले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । यहि ऐनको दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको थियो । समितिले निर्धारण गरेको रकम सम्बद्ध जग्गाधनीलाई वितरण गर्ने तयारी भएको हो । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
बुधबार प्रकाशित सूचना अनुसार १८४ जना स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ । त्यसबाहेक आयोजनालाई आवश्यक सरकारी जग्गा पनि अधिग्रहण हुनेछ ।
मुआब्जा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले आफैं वा अख्तियार प्राप्त वारेस मार्फत प्रमाणित कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । जग्गाधनिको सक्कल प्रमाण पुर्जा, प्रतिलिपि, तिरो तिरेको रसिद र स्थानीय तहको सिफारिस सहित रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिइ म्याद गुजारेको खण्डमा कानुन बमोजिम हुने र पछि उजुरी नलाग्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
बिद्युत प्रसारण लाइन र सडकका आयोजनामा लगानीका लागि ०७४ साउनमा सरकारले अमेरिकी सरकारको ५१ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सत्ताधारी नेकपाका नेताहरू बीच उक्त सहयोग लिनु उचित हो÷होइन भन्ने बारेमा बहस टुंगिएको छैन । सरकारले स्वीकार गरेको शर्तअन्तर्गत ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणले काम अघि बढाएको हो ।
रसुवा भन्सारमा कारोवार ठप्प
विदुर\_चीनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि चीनसँगको अन्तराष्टिूय व्यापारिक नाका रसुवा भन्सारबाट हुने कारोबार ठप्प भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै चिनियाँ पक्षले १५ दिनका लागि मानिस तथा सवारी आवत जावतमा रोक लगाएपछि रसुवा भन्सारबाट हुने कारोबार ठप्प भएको हो । चिनियाँ पक्षले सूचना नै निकालेर रसुवा नाका गत बुधबार देखि १५ दिनका लागि बन्द गरेको भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले बताए । केरुङबाट कन्टेनर नआएकाले अहिले रसुवा भन्सार कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको याडमा एक दुई कन्टेनरहरु मात्र रहेका छन् । दैनिक करोडौ रुपैया राजश्व संकलन गर्दै आएको भन्सार कार्यालय सुनसान बनेको छ । दैनिक याडमा काम गर्दै आएका छ सय जना कामदारहरु समेत बेरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो समय चिनियाँ नयाँ वर्ष र हिमपातका कारण नाका प्रभावित भएको थियो । नाका बन्द भएपछि केरुङतर्फ गएका २ सय वटा कन्टेनरहरु फर्किन सकेका छैनन् ।
रसुवागढी नाका बन्द हुँदा चीन सँगको व्यापार प्रभावित भएको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
२०७६ माघ २७ गतेको सम्पादकिय
युनोप्स्को भारत भ्रमण
नुवाकोटमा भारत सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २३ हजार ८८ घरलाई आर्थिक र प्राधिक सहयोग गर्न भन्दै आएको परियोजना विवादित छ । कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेजस्तो ‘औतारी’ परियोजनलाई सुनपानी छर्कन नुवाकोटका १० स्थानीय तहका सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरू आइतवार भारतिय दुतावासमा लाम लागेका छन् । भारतको केही ठाउँ र सरकारी कार्यालयको भ्रमणका नाममा परियोजनाले नुवाकोटको पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उप्रमुखहरूलाई आइतवार दुतावासले काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित होटलमा राखेको रात्रिभोजमा सहभागी गरायो । केही गाउँपालिका अध्यक्षले यसप्रति ठाडो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर ‘भक्तिदर्शन’ मा सहभागि नहुने घोषणा गरेका छन्, र रात्रि भोज देखि भारतमा प्राप्त हुने सुविधायुक्त बसाई, भ्रमण र विदेशी मुद्रामा उपलब्ध हुने दैनिक भ्रमण भत्ता त्यागेका छन् । सोमवार बिहानै भारतका लागि उढ्न नुवाकोटबाट दुतावास प्रस्थान गरेका ‘सरकारहरू’ का कारण कामचोर परियोजनाले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय यही भारतिय सहयोग परियोजनका कारण भुकम्प पिडितहरू झन् पिडित भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युपोप्स्) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता भएको प्रमाण सहित नुवाकोटका सञ्चार माध्याममा भदौं, २०७६ देखि समाचार आइरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहका भुकम्प पिडित नागरिकहरूका लागि काम गरिरहेको यो परियोजनाले काम कम ‘राजनीति बढि’ गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारसंग समन्वय नै नगरी काम गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले चर्को आलोचना गरिरहेको समयमा यसरी सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई दैनिक भ्रमणभत्ताको समेत व्यवस्था गरेर माघ २७ देखि फागुन २ गतेसम्म भारत भ्रमणमा लैजानु, आइतवार दुतावासले भब्य होटलमा रात्रिभोज दिनुले काम कम र ‘सेटिङ्ग’ ज्यादा गर्ने योजनामा परियोजना देखिएको छ । जनताको नाममा आएको रकम र कार्यक्रमको सुक्ष्म समीक्षा र खवरदारीको सट्टामा उनीहरूको ‘भ्रमण’ प्रस्ताव स्विाकार गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको भुल हो । उनीहरूको कामको विषयमा फागुन ३ गतेदेखि सबै स्थानीय तहले औला उठाउनसक्ने हौसियत राखेर भारतबाट हाम्रा सरकारहरू फर्कन सक्लान् ? बाँकी एक वर्षको अवधिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको सुकिलो प्रमाणपत्र लिनका लागि रचिएको प्रपञ्चमा किन फसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू ?
▼ February9- February 16 (16)
काठमाडौंको बिकास र निकासका लागि नुवाकोटको विकल्प छ...